Tapa-bolana taorian’ny nahalasanan’i Fafah: nodimandry omaly koa i Dadah | NewsMada
Usurpation de titre : l’étau se resserre autour de Ny Rado R. ...février 17, 2020
Nisandoka ny anaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny: maorisianina iray sy Malagasy roa nidoboka eny Ant ...février 17, 2020
«Raharaha… tandra»: nivoaka ny didy, nohafahan’ny fitsarana madiodio ilay mpikabary
Tapa-bolana taorian’ny nahalasanan’i Fafah: nodimandry omaly koa i Dadah
Tampoka loatra ka saiky tsy nampino ny maro. Tapa-bolana… monja taorian’ny nahalasanan’i Fafah, nodimandry, omaly, koa i Dadah, iray amin’ireo nanangana ny tarika Mahaleo hatrany am-piandohana.
Very olomanga iray indray ny fianakaviana, ny tarika Mahaleo, ny tontolon’ny zavankato malagasy, ny Malagasy, i Madagasikara ary ireo sehatra nahitana azy… Nodimandry, omaly, i Dadah (tarika Mahaleo). Raha ny resaka fohy nifanaovana tamin’i Bekoto, « tany Antsirabe raha avy nitsena ny zanany avy any ivelany izy… Avy nisakafo izy no kofona. Nitarika fahatapahan’ny lalandra izany ka izao niafara tamin’ny fodiamandry izao. Hatreto, tsy mbola misy azo ambaran’ny tarika Mahaleo fa mbola hidina any Antsirabe izaho sy i Dama, na anio na rahampitso ».
Teraka tamin’ny 21 jona 1954 (65 taona) Andrianabela Rakotobe fantatra amin’ny solonanarana Dadah amin’ny maha mpanakanto azy. I Dadah Rabel ihany koa rehefa tafaraka amina mpanakanto hafa. Mpitsabo (docteur en médecine) ny asa niantsorohany.
Tsy ela fa vao tamin’ny faran’ny herinandro teo izy no nanolotra seho tao amin’ny Plazza Ampefiloha, ho tsiahy an’i Fafah. Tsikaritry ny mpijery tamin’izany fa tao anatin’ny alahelo sy embona an’i Fafah i Dadah. « Nilatsaka hatrany ny ranomasony! », hoy ny mpijery.
Raha tsiahivina, fito mirahalahy (Dama, Dadah, Raoul, Charles, Bekoto, Fafah, Nonoh) no nanorina ny tarika Mahaleo tany amin’ny taona 1972. Efa nindaosin’ny fahafatesana i Raoul, i Nonoh, i Fafah ary i Dadah. Marihina fa sady namoron-kira no mpihira ary nitendry gitara ihany koa i Dadah. Eo amin’ny lafiny finoana, sady diakona no mpitendry zavamaneno, mpikambana ao amin’ny antoko mpihira AMA ao amin’ny FJKM Katedraly Analakely i Dadah.
Mirary fiononana feno ho an’ny fianakavian’i Dadah manontolo sy ny tarika Mahaleo ary ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny Gazety Taratra.
Association Accueil Madagascar Happy New Year 2020 en la présence de SEM #Photo 17/02/2020
Usurpation de titre : l’étau se resserre autour de Ny Rado R. 17/02/2020
Nisandoka ny anaran’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny: maorisianina iray sy Malagasy roa nidoboka eny Antanimora 17/02/2020
Omnis: nahatratra 31 ha ny tany voavoly hazo 17/02/2020
Ilaka Centre: tohodrano manondraka 180 ha 17/02/2020
La Kraoma souffre pareil, avec ou sans les Russes